Wasiirka waxbarashada Soomaaliya oo dhagax dhigay dugsiga sare ee Howlwadaag - Halbeeg News
Wasiirka waxbarashada Soomaaliya oo dhagax dhigay dugsiga sare ee Howlwadaag
Wasiirka waxbarashada Cabdulahi Goodax Barre iyo madaxa Midowga Yurub Pinji Gardiyola oo si wada jir ah u dhagax dhigaya dugsiga sare ee Howlwadaag,6-2-2019
MUQDISHO(HALBEEG)- Masuuliyiin oo kamid yahay wasiirka waxabasrashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa maanta dhagax dhigay dugsigii sare ee Howlwadaag oo ay wax ku baran doonaan ardayada degan howlwadaag.
Wasiirka waxbarashada oo ay wehlinayaan wasiirka qorsheynta Jamaal Maxamed Xasan, madaxa Midowga Yurub Pinji Gardiyola ,madax ka socotay hay’adda Adra ayaa ka qeyb galay munaasabadda xarigga looga jarayay iskuulladda hoose dhexe ee howlwadaag iyo Xassan Qariidi.
Wasiir Jamaal Maxamed Xasan oo munaasabadda ka hadlay ayaa shegay in dowladda ay mar walba diyaar u tahay horumarinta waxbarashada dalka iyo in dib loo soo celiyo dugsiyadii burburiyeen dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay.
Madaxa Midowga Yurub Pinji Gardiyola ayaa sheegay in ay qeyb ka qaadan doonaan horumarinta waxbarashada Soomaaliya waxaana uu u mahad celiyaya dowladda Soomaaliya oo qeyb weyn ka qaadatay hirgelinta mashruucaan.
Wasiir Cabdullaahi Goodax Bare oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in ahmiyadda koobaad la siin doono horumarinta waxbarshada dalka islamarkaana loo baahan yahay in lasoo saaro macalimiin tayo leh si ardayda Soomaaliyeed ay heer u gaaraan.
“Sida aad ka war qabtaan maanta waxa aan isugu nimid in aan u dabaal dagno dayactirka labada iskuul sidoo kale muhiimad gaar ah bey noo leedahay dhagax dhiga dugsi sare oo ay yeelato dagmada Howlwadaag sida aan ognahay ardayda inta badan waxa ay aadaan dagmooyin kale si ay u helaan dugsi sare maanta waxaad nasiib u yeelateen hadii aad tihiin dadka dagmada holwadaag in aad heshaan dugsi sare” ayuu yiri wasiirka waxbarashada Soomaaliya.
Wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta in gacanta dowladda dib loogu soo celiyo iskuuladii dowladda islamarkana kor loo qaado aqoonta macalimiinta iyo tayada waxbarashada Soomaaliya.
200 oo askari oo loo furay tababar la xiriira canshuur uruurinta